Sidee xiniinyaha ku jiraan | Niman qurux badan
Alicia tomero | 19/11/2021 20:18 | Caafimaadka
Xiniinyaha ayaa ah gondolas (qanjirka xubnaha taranka) lab. Waxay ku yaalaan hoosta iyo labada dhinac ee xubinta taranka. Waxay ku hayaan kiishashka xiniinyaha ee u qaabaysan maqaarka iyo dhawr lakab oo kale si ay u ilaaliyaan. Unugyada murqaha Waa mid ka mid ah lakabyada ka dhigi doona bacda sameysan inay laalaabto, taasoo ka dhigeysa xiniinyaha kuwo aad u dabacsan ama urursan.
qanjidhadaan waa kuwa soo saara shahwada iyo hormoonnada jinsiga oo ay ku jiraan testosterone. Shaki la'aan waxaan ka hadlaynaa xubnaha qanjidhada oo aad u weyn marka loo eego waxa habka taranka ee labka ah.
1 Waa maxay qaabka xiniinyaha?
2 Gobolka Scrotal
3 Dastuurka xiniinyaha gudaha
4 Hawlaha xiniinyaha
Waa maxay qaabka xiniinyaha?
Xubnahan waxay leeyihiin qaab oval ah oo dhererkiisu u dhexeeyo afar ilaa siddeed sentimitir iyo laba ama saddex sentimitir oo ballac ah. Waa lagu hareeraysan yahay bac maqaarka ah oo loo yaqaan xiniinyahaWaa mid aad u qallafsan oo aad u jilicsan, taas oo ka dhigi doonta heerkulkeedu ka hooseeyo kan jidhka intiisa kale, inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 ° ka yar. Muuqaalkiisa, timaha ama midabkiisa ayaa aad ugu xirnaan doona nin ilaa nin kale marka loo eego qoomkiisa ama da'diisa.
Dadku, sida xayawaanka intiisa kale, waxay leeyihiin xiniinyaha ka yimaad qaybta caloosha, Midig iyo bidix ee laf dhabarta lumbar iyo ku xiga kelyaha. Xilliga uurka hooyada, ilmaha labka ah ayaa xiniinyaha ka soo baxa caloosha, laakiin waxay ka tagaan gobolkan si ay u noqdaan. hoos ugu dhaadhac aagga gumaarka, adigoo ku jiidaya bacaha ku wareegsan oo dib u habeyn ku sameeya qaabka ugu dambeeya.
Xiniinyaha midabkoodu waa casaan ama buluug-cad, Dhammaan waxay ku xirnaan doontaa sida aad u daadisay dhiiggaaga. Waa wax caadi ah in la helo cysts yar yar oo dufan leh da 'weyn oo aan ahayn carruurnimada, anjiomas u eg rabitaan, xididdada varicose, inkastoo dhammaantood iyada oo aan la soo sheegin nooc kasta oo dhibaato halis ah.
Waa aagga dhan ee daboola ama ku wareegsan xiniinyaha. Waxay u qaabaysan yihiin joonyado iyo dheerayn. Waxay ku taal meel ka hoosaysa aagga cawska, xagga hore ee perineum iyo gadaashiisa guska. Gobolkan oo dhan waxa loo qaybiyaa dhawr lakab:
Maqaarka ama xiniinyaha: waa meesha ugu fiican uguna baxsan, meesha ay timuhu ka soo baxaan.
Darts: Waa lakabka sii socda ilaa xiniinyaha, sidoo kale waa dhuuban oo ka kooban yahay fiilooyinka muruqa ee siman.
Seros tunic ama Cooper's fascia: waxay leedahay anatomy la mid ah fiilooyinka ka yimaadda muruqa weyn ee caloosha. Fiilooyinkaan waxaa jiidaya xiniinyaha si ay uga soo degaan caloosha una soo jeediyaan aagga xiniinyaha.
Dharka murqaha ah: Waxaa lagu sameeyay balaadhinta muruqa kareemka, kaas oo la socda xuddunta shahwada. Fiifiyadeedu waxay ka yimaadaan fiyuusyada murqaha ee murqaha ballaaran ee caloosha kuwaas oo sidoo kale hoos u dhigaya xiniinyaha.
Tuubada xumbada leh: Waxay u qaabaysan tahay kiishad oo kale waxayna ku wareegsan tahay aagga xuddunta shahwada iyo xiniinyaha.
Tuubada siilka: waa xuub serous oo isku laabma xiniinyaha iyo epididymis
Sawir laga soo qaaday Wikipedia iyo Goobaha Google-ka Xiniinyaha, epididymis iyo shahwada funiculus bisadda guriga: 1. Qaybta hore, 2. Qaybta dambe, 3. Cidhifka epididymis, 4. geesta dibadda, 5. mesentery xiniinyaha, 6 Epididymis, 7. Isku-xidhka halbowlayaasha iyo xididdada xiniinyaha, 8. Vas deferens.
Dastuurka xiniinyaha gudaha
Xiniinyaha iyo epididymis waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo aad u kala duwan. Qayb ka mid ah waa dahaadh dhogor leh ama albugineous ah oo la yiraahdo 'xiniinyaha albuginea' waana ta xiniinyaha daboosha. Oo waxaa jira 'epididymal albuginea' oo daboolaya epididymis.
Albuginea xiniinyaha Waa qayb aad u fibre ah oo ku wareegsan xiniinyaha, qaybteeda dibadda waxaa sameeyay 'warqadaha visceral' ee tuubada siilka. Oo qaybteeda guduhu waxay u dhigantaa nudaha xiniinyaha laftiisa.
Qaybta dambe ee soohdinta sare waa Jidhka sare ee 'Highmore body' halkaas oo shabakad ka mid ah tubbada shahwada ee loo yaqaan 'Haller's network' laga sameeyay. Taxane lamellae ah ama septum ayaa ka baxaya mid ka mid ah qaybaha Highmore ee ku fidaya xiniinyaha xiniinyaha, iyaga oo u qaybinaya lobules.
Shaqada xiniinyaha ayaa ugu horrayn tan abuur iyo kaydi shahwada, Laakiin aan si dhow u eegno waxa kale ee ay abuuri karto:
Soo saarista shahwada: tuubooyinka seminiferous waxaa la abuuray, in qaybta dibadda ee derbiga tuubooyinka, halkaas oo ah unugyada jeermiska. Unugyadani waa wareega koowaad ka dibna waa la dheereeyaa, si ay ugu dambeyntii noqdaan shahwada qaangaadhka ah. Halkaa waxay ka sii mari doonaan tuubooyinka si ay ugu dabaasho xagga epidymis, vas deferens iyo xididdada dhiigga, halkaasoo ugu dambeyntii lagu keydin doono.
Wax soo saarka testosterone: Waxa laga helaa unugyada interstitial in isla markaa la dhigo inta u dhaxaysa tuubooyinka, aag qani ku ah unugyada Leydig ee masuulka ka ah abuurista. testosterone. Hormoonkaas waxa loo qaybin doonaa jidhka oo dhan iyada oo loo sii marayo dhiigga si uu u guto shaqadiisa. Haddii testosterone hoos u dhaco si nasiib ah, waxay noqon kartaa sababtoo ah xiniinyaha ayaa aad u yar dhalashada (xiniinyaha atrophy), ama sababtoo ah unugyada xiniinyaha ayaa lumay, ama sababtoo ah gelitaanka menopause ee ragga ama isticmaalka xadgudubka ah ee steroids anabolic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sidee bay xiniinyaha ku jiraan